Mali: Tombouctou, Tandindonin-Doza Ny Haren-Kolontsaina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Avrily 2012 4:53 GMT
Vakio amin'ny teny English, Deutsch, polski, Italiano, Español, Ελληνικά, Français
Mampahatsiahy zavatra malaza sy toetr'andriana izany anarana Tombouctou izany ho an'izao tontolo izao. Nefa mahatandindonin-doza an'i Tombouctou ny ady any avaratr'i Mali sy ny fisian'ireo henja-pihetsika vitsy dia vitsy an'isa ao. Milaza ny fahasahiranany momba ny loza mety ateraky ny ady amin'ny vakoka iraisampirenen'i Tombouctou ao amin'ny fanambarana an-gazety, ny tale jeneralin'ny UNESCO, Rtoa Irina Bokova:
Araka ny vaovao navoakan'ny gazety, niditra tao an-toerana ny mpioko ary nandrenesana tifitra tao. Manana toeram-bakoka telo ankoatra ny ao Tombouctou i Mali : ny Tanàna talohan'i Djenné, ny Hantsan'i Bandiagara (faritras dogon) ary ny Fasan'ny Askia.
Foiben-kolontsaina sy fampielezana ny finoana miozolomana ny tanànan'i Tombouctou nandritra ny taonjato faha-XV sy XVI ary nihoatra lavitra an'i Mali ny lazany. Maro ny anjerimanontolo ampianaran'ny manampahaizana avy amin'ny tontolo miozolomana [manerantany] ao. Mbola ao avokoa ny moskea telo lehibe Sidi Yahia, Djingareyber ary Sankoré izay miakatra amin'ny taom-bolamenany, saingy tandindonin'ny fasika izy ireo. Ary maro indrindra indrindra ny boky ao aminy.
Saingy, ahiana hampanjavona mandrakizay ny harem-bakoka ny fandosiran'ny olona any amin'ny firenenkafa na faritra hafa noho ny fisian'ny ady faramparany teo. Manombana ao amin'ny africultures.com i Christelle Marot, mpanao gazety sady mpamahana bolongana ao Casablanca, misahana ny tahiry voasoratra ao Tombouctou fa:
Nandritra ny fampirantiana nomanin'ny tanomboky Fondo Kati tao Tombouctou hampiroboroboana ny fameloma-maso indray ny kolontsaina hispano-miozolomana sy ho fampahafantarana ny fifandraisana akaiky sy vakoka niraisana tamin'ny faritra sy tanandehibe Espaniola no nanoratan'ny mpanao gazetySalimata DIOUARA :
Hita ao amin'ny tombouctoumanuscripts.org, fa nanampy tamin'ny fananganana ny Ivotoerana Vaovao Ahmed Baba tamin'ny vola miteninta 2,5 miliara Francs CFA [381 000 Euros] ka manana velarana 4 800 m2 ahitana trano mitohatohatra (amphithéâtre) misy seza 500, efitra fivoriana mahazaka olona 300 ary tranomboky i Afrika Atsimo. Io Ivotoerana io dia:
Nampahatsiarovin'i Christelle Marot ao amin'ny hafatra efa voalaza etsy ambony ao amin'ny Africultures ihany koa:
Hanao ahoana io harentsaina an'olombelona io? Nampisy fitaintainana nanerana ny lafivalo ny mety ho valin'izany fanontaniana izany taorian'ny nahazoan'ny mpioko toaregy sy ny fiaraha-mientana islamista avy amin'ny Ansar Dine sy ny Al-Qaeda Maghreb Islamika ny tanànan'i Tombouctou. Ao amin'ny takelaka mitondra ny lohateny hoe “Après les Bouddhas de Bamyan, les manuscrits de Tombouctou?” [Aorian'ny Boddahn'i Bamyan ny tahirintsoratr'i Tombouctou?] no nandraisan'i Hervé Bar ny tenin'i Hamady Bocoum, talen'ny Institut fondamental d'Afrique noire (Ifan) ao Dakar:
Mampahatsiaro i Guy Alain BEMBELLY fa efa voasoratra ao anatin'ny vakoka ara-kolontsaina manerantany ny tanàna hatramin'ny 1988:
Tononin'i Bembelly ao amin'ny takelakany ny fehezanteny vitsivitsy heverina ho avy amin'io manampahaizana niaina tao Tombouctou ary anisan'izany ity nosoratan'i Ahmed Baba (1556-1627) ity izay miteronterona ao amin'ny ivotoerana mitondra ny anarany:
Indrisy fa tsy isalasalana intsony ny fivadihan'ny toe-draharaha, ny tranga ahiana ho ratsy indrindra no miseho eo amin'ny lafiny ara-tafika. Nihemotra teo anatrehan'ny vondro-kery hafa mahery setra kokoa ny Mouvement national de libération de l'Azawad (MNLA) [Hetsi-pirenena ho fanafahana an'i Azawad], izay mba mirona kokoa ho amin'ny maha-laika azy sy mba mitady haja kokoa. Nanambara i Moussa Haïdara, mpaka sary, nandrakitra an-dahatsary ny fidiran'ny andiam-piaran'ny Ansar Dine, eo ambany fitantanan'ilay Toaregy Iyad Ag Ghaly, voatonona ao amin'ny takelaka navoakan'i slateafrique.com: